Ndị ọkachamara na-eji ígwè ọrụ ịkụzi ihe - Gaa! AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ (Ụdị oge // BSO // CAMPUS RUGGEVELD)
Ihe ọmụmụ anyị
Ụlọ akwụkwọ anyị
bụbu ụmụ akwụkwọ
Na ihe ngosi
BASIC MECHANICS MACHINES
(atụgharị - freza)
(WO) MAMA ma ọ bụ Ụkwụ
Kedu ihe ị mụtara?
ụdịdị dị iche iche School > Ihe ọmụmụ anyị > Metal & Mechanics > Ngwá ọrụ ígwè ọrụ
Ọzụzụ Ọmụmụ Ihe + (BSO) nke Gaa! Ụlọ akwụkwọ sayensị, campus Ruggeveld
Na BSO oge zuru ezu Nhazi Mechanics (Ngwaọrụ) igwe kụziere ígwè ọrụ gị ma ọ bụ kọmputa na-achịkwa iji dezie ihe. Ị na-amalite na-atụgharị, na-egwe ọka ma na-egweri ma ị mụta ịbakota ma kwatuo ihe owuwu. Ị na-amụtakwa otu esi arụ ọrụ na CNC igwe. Ị mụtara ịmepụta nke ọma na nbudata ọrụ, nyocha ọrụ na ụzọ ọrụ. Ọ bụ otu ọzụzụ dị irè na ihe ole na ole n'ozuzu. Ihe a na-elekwasị anya bụ inweta ihe ọmụma, nkà na ahụmahụ site na ọtụtụ oge omume na n'oge ụwa.
Na Ihe nrịta 2e nke Machines ị na-amụta usoro ndị dị mkpa dị ka ịkụ ala, ịkụgharị, ịtụgharị na ịmegharị na nkà dịka ịgbado ọkụ, ịkwado na ịkụzi. N'ọmụmụ ihe anyị, ị na-amụta banyere ọrụ na ntanetịtị nke mgbịrịgba (ịbịaru na agbagharị agba). Ị na - amụta (ez), kpebie iyi na ịkọ akụkọ. Ị na-etinye ihe ọmụma a dị iche iche maka ụdị ngwá ọrụ ọ bụla dịka robot, crane, train .... Ị na-amụta ntinye akwụkwọ na / ma ọ bụ milling (nhazi na nchikota ...), mbigharị (nkwụsị aka, nchacha mkpụrụ, cylinders ...), usoro CNC na ikuku. Na n'oge gara aga, a na-akpọ ihe ọmụma a mgbe ụfọdụ ka ọ bụrụ ụzọ ntụgharị maka ọrụ dịka onye na-atụgharị igwe. Nke ahụ ka bụ eziokwu, ma n'ihi iji kọmputa na ICT eme ihe n'ụzọ zuru oke, anyị na-azụkwa gị ịrụ ọrụ na ngwaọrụ CNC.
Na Ngwunye 3e Ngwaọrụ ị ga-adị njikere ịghọ ezigbo ọkachamara / nwanyị nke nwere ike ịhazi ihe dị iche iche na ngwaọrụ ndị ejiri aka ma ọ bụ kọmputa. N'ọmụmụ ihe anyị, ị na-arụ ọrụ na ngwongwo, ngwugwu, ihe mgbakwunye, igwe nri na igwe nsị. Ị na-amụta weld na weld efere na ihe profaịlụ, wụnye ikpo ọkụ ike, (de) ichikota ma gbanwee akụkụ ihe owuwu. Ị ga-amụta ịmepụta igwe CNC, jiri nbịaru mmemme na kọmputa, ọrụ na ederede maka nchịkọta ego, wdg.
N'oge gị ụwa ị nweta ohere zuru oke nke ihe ị maara ma nwee ike itinye n'ọrụ. Ị na-atọ ụtọ ezigbo ọrụ n'ime ụlọ ọrụ.
Ị dị mma
Ị bụ ọkachamara na nkà na ụzụ
Ị na-arụ ọrụ nke ọma
Ị nwere mmasị na ntuziaka, igwe, ma na-ejikwa kọmputa arụ ọrụ nke ígwè? Ị kwesiri ike ma dị njikere ịmụta ihe site n'omume, ọ bụ na ị gaghị ajụ ọrụ nkịtị?
Mgbe ahụ, ntụziaka a nwere ike ịbụ ihe maka gị.
Kedu ihe anyị ga-atụ anya?
Ị nwere ike ịmalite mgbe niile na ọzụzụ Machines, ọ bụ ezie na ịmara nke ọma nke metal & mechanics bụ ihe atụ. Otú ọ dị, ọchịchọ ị ga-arụ ọrụ ma mụta na omume dị ezigbo mkpa.
Ezi nhazi ihe bụ 1 ogo ụlọ ọrụ.
Mgbe nhazi 3e (Ngwaọrụ) igwe ị nweta ya akwụkwọ nke Secondary Education. Ị nwere, Otú ọ dị ọ bụghị akwụkwọ diplọma nke abụọ. Ya mere, a na-atụ aro ka inwe otu Afọ 7e maka iche iche ịgbaso. N'ụlọ akwụkwọ anyị, ị nwere ike ịmepụta nke ọma na ebe a na-amụ ihe Ngwaọrụ nchịkwa kọmputa. Mgbe ọ na-enweta ya diplọma nke mmụta sekọndrị ị bụ onye ọrụ na-arụ ọrụ ma ị nwere ike ịmalite ọrụ n'ebe ọrụ ma ọ bụ ọbụna ịmalite azụmahịa gị.
Tebụl dị obere
Ebee ka ị ga-esi nweta ihe mmụta?
Ịmụta ọrụ ụlọ
Mụta + Ikike zuru ezu
Ajụjụ ọ bụla?
Gaa ebe a na tebụl nkuzi nke BSO ọzụzụ.
Afọ 3e nke na-erughị ala (38KB, .pdf)
Afọ 4e nke na-erughị ala (38KB, .pdf)
Afọ 5e nke na-erughị ala (38KB, .pdf)
Afọ 6e nke na-erughị ala (38KB, .pdf)
Ị na-amụta ihe campus Ruggeveld na Deurne.
Gaa! Ụlọ ihe nkiri
2100 Deurne (Antwerp)
I nwere ike iru anyị site na tram 10 - tram 5 - tram 8 - 19 bus - 410 bus - 411 bus - 412 bus
Hụ na Google Maps
Site na ogo 3 ụwa akụkụ dị mkpa nke ọzụzụ ahụ, kamakwa n'oge gara aga, ụmụ akwụkwọ enweelarịrị na kọntaktị na ụlọ ahịa ụlọ ahịa na ụwa azụmahịa.
Ndị nlekọta na ndị ọrụ anyị nwere ọrụ ahụmahụ nke afọ na-eduzi ụmụ akwụkwọ anyị na ụlọ ọrụ ahụ. N'ime ngalaba mmụta ọ bụla anyị nwere ọtụtụ netwọk nke ụlọ ọrụ ebe ọhụụ ga-agba ọsọ.
E nwekwara ije otutu mmekorita ya na ndi otu, ụlọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, dị ka VDAB, Agoria, Umicore, Atlas Copco, wdg.
Usoro a na-akwụ ụgwọ n'ezie. 7 na ndị ọrụ 10 ga-akwụ onye ọrụ ụgwọ ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ha nwere ụdị nke ọrụ ebe a na-azụ ha, dika nyocha UNIZO si kwuo. "Ọmụmụ ọrụ ebe ọrụ kwesịrị ịpụta onwe ha na usoro ọzụzụ niile, ma kwesiri ịdaba na mkpa nke ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ha," Onye bụbu onye isi UNIZO Karel Van Eetvelt kwuru.
Ọ bụrụ na ịchọrọ Ịmụta + Nghọta, ị na-eso otu ọzụzụ zuru oke na BSO ma ọ bụ ọkwa TSO. Nke a ga-ekwe omume site n'ọkwa mbụ. Ịhọrọ ubi n'ime Nijverheid, STEM ma ọ bụ Sport. Ị nweta ihe ọmụma dị mkpa. Tụkwasị na nke a, ị na-arụ ọrụ gị. Ị nweta ọzụzụ bara uru site na anyị ndị nkụzi ọkachamara. Ịmụta na ụlọ ọrụ ahụ bụ akụkụ dị mkpa nke usoro ọmụmụ oge niile anyị na-amụta na Competences. Via ụlọ ọrụ, mmụta ọrụ na imekọ ihe ọnụ na ndị ọrụ na ụlọ ọrụ ị ga-eduzi otu ebe dị mma n'ahịa ahịa. Anyị na-enye ụfọdụ ọzụzụ n'ime sọrọ Learning.
Ọ bụrụ na ị gafere otu usoro ihe omume anyị, ị ga-eme ya diplọma nke mmụta sekọndrị. Ọzọkwa a akwụkwọ njikwa azụmahịa kwere omume. Na Usoro BSO kwadebe maka ọrụ ahịa. Ị maraiche na mpaghara gị ahọpụtara na afọ 7. Na Nkwado TSO nye gị ntọala siri ike elu ọmụmụ malite n'ime ubi gị.
Anyị na-enye gị otu eji akwa-eme ụzọ ebe nduzi onye ọ bụla na otu ọkụ mmụta ihu igwe n'etiti. Ụlọ akwụkwọ anyị na ụlọ akwụkwọ na-enye anyị otutu ohere di irè.
Ajụjụ a kapịrị ọnụ banyere agụmakwụkwọ a?
Onye isi nchịkwa nke Ọmụmụ + Ọmụma
Banyere ụlọ akwụkwọ anyị
Ụlọ akwụkwọ anyị, bụ Spectrumschool, na-enye karịa NNUMX ọzụzụ nkà na ụzụ na Nijverheid, STEM, Sport, Care, Hospitality & Logistics.
Site n'ọhụụ "Ịmụta Ihe" anyị, anyị na-enye nwa akwụkwọ ọbụla usoro nke a na-eji akwa. Anyị na-arụ ọrụ na-eme omume ma na-elegide anya n'inye nduzi n'ahịa ahịa.
Na mgbakwunye na ngwugwu nkuzi ahụ, anyị na-arụ ọrụ site na oru ngo na ihe omume na-eme ka ọ dịkwuo ike ịzụlite àgwà nke onye mmụta ahụ ma chọpụta talent ya. Ịkwado nlekọta bụ isi bụ etiti.
Tụkwasị na nke a, anyị nwekwara ngalaba OKAN (Mwepụ Ntuzi Maka Ndị Na-adịghị Erite Uru).
Ekwentị: + 32 (0) 3 328 05 00
Ekwentị: + 32 (0) 3 217 43 40
Monday: 8U00 - 16U30
Tuesday: 8U00 - 16U30
Wednesday: 8U00 - 12U00
Tọzdee: 8U00 - 16U30
Friday: 8U00 - 16U30
mechiri na Saturday na Sunday